Gbanyụọ onye na-eme ihe na-eweta akwụkwọ ozi | Rayson
Anyị na-ege ntị nke ọma na ihe ndị ahịa chọrọ ma na-echekwa ahụmịhe ndị ọrụ mgbe niile n'uche mgbe ị na-azụlite matraasi Coldy. A na-anakwere ihe eji eme ihe kwesiri ekwesi iji hụ n'ogo ngwaahịa na arụmọrụ ya kachasị gụnyere rayson. Na mgbakwunye, o nwere ọdịdị nke e mere iji duzie ụlọ ọrụ.
Na-ekpochapụ ahịrị ndị ọrụ na-emepụta ihe na ndị ọrụ nwere ahụmahụ, ndị na-eweta ndị na-emepụta ihe, zụlite, na nwalee ihe niile dị arụ ọrụ. N'oge niile usoro ahụ dum, ndị ọkachamara QC anyị ga-elekọta usoro ọ bụla iji hụ na ogo ngwaahịa. Ọzọkwa, nnyefe anyị bụ n'oge, nweekwa ike igbo mkpa nke onye ahịa ọ bụla. Anyị na-ekwe nkwa na ezigara ndị ahịa na nchekwa na ụda. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ chọọ ịmatakwu banyere matraasi Coil, kpọọ anyị ozugbo.
Ndị na-emepụta ihe nkiri Rayson mmiri na-agbasa ike na arụmọrụ ọrụ dị elu. Ọzọkwa, anyị ebilitela nke ọma RENT R & D siri ike R & D siri ike, nke na-eme ka anyị zụlite ngwaahịa ọhụrụ dịka matraasi cand na-eduzi. Ndị ahịa nwere ike ịnụ ụtọ ọrụ ndị ahịa na-enye afọ ojuju dịka ọkachamara na ngwa ahịa ahịa. Anyị na-anabata ajụjụ gị na nleta ala.
Rayson na Rayson Industrial Mpaghara, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Mpaghara, Guangdong, China. Main ngwaahịa Ọkachamara Best Sale ngwaahia Size Memory ụfụfụ Advertising Ohiri Isi emepụta
Memory ụfụfụ 5 zones mmiri Mattresses ka nke n'akpa uwe mmiri, na 5 Mpaghara elu njupụta ụfụfụ. Okomoko, mara mma, imewe ọgbara ọhụrụ. Enwere ike ịhazi ogo na usoro ọ bụla.
Nnukwu mmiri ozuzo Bonnell dị ọnụ ala + https: //www.raysonglobal.com.cn